Mpanondrana Moringa & Famokarana Moringa tsy miankina - Moringa Wholesale Supplier Exporter | Private Label Moringa Manufacture | Moringa Powder - Moringa Leaves - Moringa Oleifera Capsule | Daun Kelor Grosir
Home / Info Lombok Gili / Mpanondrana Moringa & Famokarana Moringa tsy miankina
Mpanondrana Moringa & Famokarana Moringa tsy miankina
Te hanao vokatra Moringa ho anao manokana ve ianao?
Vaovao tsara! Afaka mamokatra vokatra vita amin’ny moringa izahay amin’ny alàlan’ny marika / marika manokana moringa / vokatra marika fotsy an’ny Moringa Oleifera
Avelao ho anay ny fizotran’ny famokarana rehetra, azonao ny entana vita amin’ny fonosana farany eo ambanin’ny marikao.
Tena mety ho an’ny orinasa B2C, toeram-pivarotana lehibe, hotely & café, tompona trano fisakafoanana, orinasa mpivarotra, sns. Azafady mba mifandraisa aminay amin’ny alàlan’ny laharana whatsapp +62-877-5801-6000
Ny Ccmpany anay dia Mpanamboatra, mpamatsy ary mpanondrana vovon-davenona organika, voan-javamaniry ary menaka moringa.
Orinasa Moringa mitambatra izahay izay misahana ny fitantanana ny toeram-pambolena Moringa amin’ny famokarana vokatra Moringa fanampiny.
Manondrana vovon-dravina Moringa organika any amin’ny firenena 20 mahery maneran-tany izahay.
Ny ankamaroan’ny marika ara-tsakafo malaza dia nampiasa ny vovon-davenonay Moringa tamin’ny famolavolana azy ireo.
Any amin’ny faritanin’i Nusa Tenggara Andrefana any Indonezia ny toeram-piompiana sy ozinina Moringa, kilaometatra miala ny fitohanan’ny fifamoivoizana sy ny indostrian’ny loto.
Miara-miasa amin’ny tantsaha madinika an-jatony izahay ary nanangana fikambanana ara-barotra ara-drariny mba hambolena Moringa tsara indrindra eran-tany amin’ny toetr’andro tropikaly. Manana rojo famatsiana mangarahara tanteraka izahay.
Ny vokatra rehetra azonay dia azo jerena ao amin’ny toeram-pambolena izay niaviany. Manolotra vokatra Moringa organika tsara indrindra avy amin’ny loharano izahay.
Na dia kely aza ny habeny, ny ravina Moringa dia manana tombony ara-pahasalamana lehibe. Raha ny marina, ny mpahay siansa dia miantso azy io ho hazo majika (Hazo Fahagagana). Ny ravin’ny moringa dia oval, ary kely ny habeny, voalamina tsara eo amin’ny tahon-kazo, ary matetika no masaka ho anana hanaovana fitsaboana. Nanomboka tamin’ny taona 1980 ny fikarohana momba ny fahombiazan’ny ravina Moringa, eo amin’ny ravina, avy eo amin’ny hodi-kazo, voankazo ary voa.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana OMS dia manoro hevitra ny ankizy sy ny zaza vao teraka mba hihinana azy, noho ny tombontsoa azo avy amin’ny ravin’ny Moringa, izay misy: Potasioma telo heny noho ny akondro, Kalsioma efatra heny noho ny ronono, Vitaminina avo fito heny. C noho ny voasary, inefatra heny ny vitaminina A noho ny karaoty, indroa ny proteinina noho ny ronono.
Nantsoin’ny fikambanana OMS ho hazo mahagaga ny hazo Moringa, rehefa nahita ny tombontsoa lehibe azo avy amin’ny ravina Moringa. En.wikipedia.org Fandalinana, lahatsoratra ary tatitra maherin’ny 1.300 no nanazava ny tombontsoa azo avy amin’ny Moringa sy ny fahaizany manasitrana, izay zava-dehibe amin’ny fiatrehana ny fihanaky ny aretina sy ny olana amin’ny tsy fahampian-tsakafo. Ny fikarohana dia mampiseho fa saika ny ampahany rehetra amin’ny zavamaniry Moringa dia manana fananana manan-danja, izay azo ampiasaina amin’ny fomba maro.
Ny soa azo avy amin’ny ravina Moringa.
Ny zava-dehibe tsy tokony hohadinoina dia ny fitazonana ny vatana handanjalanja amin’ny lanjany. Ny fanadihadiana nataon’ny manampahaizana dia nahita fa ny dite Moringa dia manampy amin’ny fiatrehana ny olan’ny fandevonan-kanina izay ny tombontsoany dia ny manentana ny metabolisma ao amin’ny vatana mba handoro kaloria tsara indrindra.
Ny dite vita amin’ny ravina Moringa dia misy polyphenols avo, izay miasa toy ny antioxidants. Ny tombontsoa azo avy amin’ny antioxidants dia manala ny poizina ao amin’ny vatana, ary manamafy ny hery fiarovana.
Esory ny pentina amin’ny tarehy.
Ny akora tsotsotra dia maka ravinkazo maingoka kely vitsivitsy, kapohina mandra-pahavaratra dia atao vovony (na azo afangaro amin’ny vovoka ihany koa), fa any amin’ny tany sasany dia efa nampiasaina ho akora amin’ny fanamboarana makiazy ho an’ny tarehy. hoditra. Ny ampahany amin’ny zavamaniry Moringa izay ampiasaina betsaka amin’ny hoditra dia ny hodi-kazo, ny ravina, ny voninkazo ary ny voa.
Ny ravina Moringa dia misy otrikaina toy ny calcium sy mineraly toy ny varahina, vy, zinc (zinc), magnesium, silica ary manganese. Ny ravina Moringa koa dia mety ho moisturizer voajanahary, misy fampiasa amin’ny fanesorana sela maty ary manadio ny hoditra.
Ny ravina Moringa dia misy antioxidants mihoatra ny 30 izay mahasoa ny fahasalaman’ny hoditra. Ny ravina Moringa dia manankarena amin’ny mineraly sy asidra amino izay afaka manampy amin’ny famokarana collagène sy keratin proteinina, izay zava-dehibe amin’ny fahasalaman’ny tadin’ny hoditra rehetra ao amin’ny vatana.
Betsaka ny marika malaza amin’ny vokatra kosmetika izay mampiasa menaka Moringa ho akora amin’ny vokatra. Indrindra fa ny vokatra fikarakarana hoditra toy ny crème anti-aging, crème anti-kentrona, menaka aromatherapy, foam-tava, lotion, crème mampazava ary déodorant.
Ny tombotsoan’ity zavamaniry Moringa ity dia tena ilaina amin’ny fahasalamana sy ny hatsaran’ny hoditra, manomboka amin’ny ravina Moringa, menaka Moringa ka hatramin’ny voninkazo Moringa. Ny voninkazo Moringa dia matetika ampiasaina ho akora ho an’ny kosmetika sy menaka manitra, colognes, menaka volo ary menaka aromatherapy. Ny voninkazo moringa dia misy asidra oleika be dia be, voadio tsara ho menaka. Ny menaka voninkazo Moringa dia azo ianteherana mba hitroka sy hitazonana ny hanitra.
Mampiasa ravina Moringa ho an’ny hatsaran-tarehy.
Ahoana? manaova paty amin’ny ravina Moringa aloha. Safidio ny ravin’i Moringa izay mbola maitso sy vaovao, misaraka amin’ny sampany. Sasao ny ravin’ny Moringa amin’ny asiana rano kely (mba hahatonga ny ravin’ny Moringa ho pasteur). Avy eo atao saron-tava dia azo tehirizina mandritra ny 3 andro ao anaty vata fampangatsiahana ny paty ravina Moringa.
Ny ravina Moringa dia manome sakafo ho an’ny reny mampinono sy ny zaza.
Ny fivoaran’ny tombotsoan’ny zavamaniry Moringa any Indonezia dia somary tara raha oharina amin’ny any ivelany. Na izany aza, mbola misy ny fahafahana mampivelatra izany ho an’ny tsena anatiny sy fanondranana. Betsaka ny mety hampivelatra ny tsena ho an’ny tombotsoan’ny zavamaniry Moringa amin’ny fanatsarana ny sakafo ho an’ny reny mampinono sy ny zaza.
Ahitana proteinina sy vy ary otrikaina C ny ravin’ny moringa. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny singa flavonoïde izay manampy ny reny mampinono hamokatra rononon-dreny bebe kokoa. Ny votoatin’ny proteinina dia mahatonga ny rononon-dreny kalitao.
Ny vy avo lenta, izay avo 25 heny noho ny epinara, no soso-kevitra hohanin’ny reny aorian’ny fiterahana, izay matetika very vy ny vehivavy tonga fotoana. Ho an’ny ankizy dia azo hanina hatramin’ny zaza, izany hoe zaza mihoatra ny enim-bolana. Ny vehivavy bevohoka dia tsy maintsy misoroka ny fihinanana ravina Moringa mandritra ny fitondrana vohoka, indrindra amin’ny trimestre voalohany.
Ny ravina Moringa dia manana vitamina A be dia be izay tena tsara ho an’ny maso. Ilaina ny fihinanana ravin-kazo moringa mba ho salama sy mazava foana ny taovan’ny maso.
Ny ravin’ny moringa dia azo ampiasaina amin’ny fitsaboana ny aretin’ny maso, azo hanina mivantana (rehefa voadio ny raviny). Ny ravina Moringa dia manana votoaty mahavelona betsaka, anisan’izany ny vitamin A sy calcium.
Ny votoatin’ny vitaminina A ao amin’ny ravina Moringa dia ilaina amin’ny fiarovana ny fahasalaman’ny maso, na manomboka mampihena ny loza ateraky ny maso plus, minus, cylinder ary katarakta izany. Tsara ihany koa ny ravin’ny moringa rehefa lanin’ny marary diabeta ary ilaina amin’ny fanadiovana ny masony.
Antioxidant sy anti-inflammatory compounds.
Araka ny tatitra navoaka tao amin’ny Asia Pacific Journal of Cancer Prevention, ny ravina Moringa dia misy fifangaroan’ny asidra amino tena ilaina, phytonutrients karotenoida, antioxidants toy ny quercetin, ary kapoaky ny antibaktera voajanahary izay miasa toy ny fanafody manohitra ny areti-mifindra.
Ny ravina Moringa dia manana fitambarana manohitra ny fahanterana maromaro izay mety hampihena ny vokatry ny adin-tsaina sy ny areti-mifindra. Ny tombony dia miha tsara indrindra amin’ny fisian’ny polyphenolic compounds, vitamin C, beta-carotene, quercetin, ary asidra chlorogenic ireo fitambarana ireo dia mifandray amin’ny fihenan’ny risika amin’ny aretina mitaiza, toy ny vavony, havokavoka, kanseran’ny colon, diabeta, hypertension, ary areti-maso noho ny antony mety hampidi-doza. taona.
Mitazona ny fahasalaman’ny voa.
Ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana ho azy dia manampy ny voa hiasa tsara (miasa), raha tsy izany dia hiangona ao amin’ny voa ny sakafo tsy ara-pahasalamana (iray amin’izany ny sakafo matavy) ka miteraka olana ara-pahasalamana. Ny fihinanana ravina Moringa, dia manampy ho azy amin’ny famerenana ny fahasalaman’ny voa izay efa ratsy.
Mampihena ny vokatry ny fahanterana.
Ny fanadihadiana 2014 navoaka tao amin’ny Journal of Food Science and Technology dia nanandrana ny tombontsoa azo avy amin’ny Moringa. Noho ny fahafantarana ny haavon’ny anzima antioxidant sarobidy, ny mpikaroka dia naniry ny hanadihady raha afaka manampy amin’ny fampihenana ny fiantraikan’ny fahanterana ny ravina Moringa, amin’ny fampiasana antioxidant voajanahary voajanahary, izay afaka mampifandanja ny hormonina voajanahary.
Ny fianarana dia nahitana vehivavy sivifolo taorian’ny menopause teo anelanelan’ny taona 45-60 taona nizara ho vondrona telo, izay nomena ambaratonga isan-karazany fanampiny. Ny valiny dia naneho fa ny famenoana miaraka amin’ny Moringa sy spinach dia nitarika fitomboana lehibe amin’ny fitambarana antioxidant, izay mitana anjara toerana lehibe amin’ny fampihenana ny vokatry ny fahanterana.
Fitsaboana rheumatism Ny ravina moringa dia azo ampiasaina amin’ny fitsaboana rheumatism.
Ny fampiasana ny ravina Moringa amin’ny fitsaboana ny rheumatism mba hampihenana ny fanaintainana eo amin’ny tonon-taolana sy ny fampihenana ny fananganana ny asidra uric ao amin’ny tonon-taolana, izay tena zava-dehibe amin’ny famahana ny olan’ny rheumatism na gout. Ny tombotsoa azo avy amin’io ravin’ny Moringa io dia azo ampiasaina amin’ny rheumatism, fanaintainana, fanaintainana, sns.
Misoroka ny aretim-po.
Ny fanadihadiana momba ny biby ao amin’ny laboratoara navoaka tao amin’ny laharana Febroary 2009 an’ny “Journal of Medicinal Food” dia nahita fa ny ravina Moringa dia misoroka ny fahasimban’ny fo ary manome tombony amin’ny antioxidant. Ao amin’ny fanadihadiana, ny fatrany 200 miligrama isaky ny kilao amin’ny lanjan’ny vatana isan’andro mandritra ny 30 andro dia nahatonga ny fihenan’ny lipida oxidized, ary niaro ny fo amin’ny fahasimbana ara-drafitra. Ny mpikaroka dia nanatsoaka hevitra fa ny ravina Moringa dia manome tombony lehibe ho an’ny fahasalaman’ny fo. Mbola ilaina ny fikarohana fanampiny mba hanamafisana ireo vokatra ireo.
Tombontsoa azo avy amin’ny ravina Moringa ho an’ny vehivavy.
Ho an’ny vehivavy dia mety tsy zava-baovao ny fihinanana ravina Moringa. Ny ravina Moringa dia heverina fa tsara amin’ny fitazonana ny fahasalaman’ny taovam-pananahana vehivavy. Saingy hita fa maro ny soa azo avy amin’ny ravina Moringa ho an’ny vehivavy. Ireo tombontsoa ireo dia ahitana;
Fisorohana ny Anemia amin’ny vehivavy bevohoka.
Aretina mampidi-doza ho an’ny vehivavy bevohoka ny anemia. Satria ilaina ny tahan’ny rà ao amin’ny vatan’ny vehivavy bevohoka mba hitazomana ny fahasalaman’ny tenany sy ny zaza entiny. Ankoatra izany, mampidi-doza ihany koa ny anemia mandritra ny dingan’ny fiterahana. Mba handresena ny loza ateraky ny anemia eo amin’ny vehivavy bevohoka dia mety ho vahaolana iray ny fihinanana ravina Moringa. Ny ravina Moringa dia manana fahafahana mampitombo hemôglôbininy mba hisorohana ny mety hisian’ny anemia.
Fisorohana ny mety hisian’ny fahasarotana amin’ny vehivavy bevohoka.
Mety hitranga na iza na iza ny fahasarotana mandritra ny fitondrana vohoka. Mba hisorohana izany dia tokony hihinana sakafo ara-pahasalamana be otrikaina sy vitaminina ny vehivavy bevohoka. Ny ravina Moringa dia mety ho safidy sakafo mahasalama ho an’ny vehivavy bevohoka. satria io ravina io dia manana otrikaina sy mineraly maro ilaina mandritra ny fitondrana vohoka.
Ampitomboy ny famokarana rononon-dreny.
Ilaina ny rononon-dreny na rononon-dreny satria aorian’ny nahaterahan’ny zaza dia avy amin’ny rononon-dreny no tena hanina. Indrisy anefa fa tsy ny vehivavy rehetra no afaka mamokatra rononon-dreny avy hatrany aorian’ny fiterahana, indraindray mila booster aloha vao mivoaka ny ronono.
Ny ravina Moringa dia manana fiantraikany galactogogue mitovy amin’ny ravina katuk. Mety hampitombo ny famokarana rononon-dreny izany vokatra izany. Amin’ny alalan’ny rononon-dreny be dia be dia azo omena ny sakafo ilain’ny zaza.
Ampitomboy ny antioxidants aorian’ny menopause.
Ny haavon’ny antioxidant ao amin’ny vehivavy dia mety hihena noho ny fihenan’ny famokarana hormonina estrogen. Mba hampitomboana ireo antioxidants ireo dia ilaina ny mihinana ravina Moringa amin’ny endrika lafarinina. Ny ravina Moringa dia inoana fa mampitombo antioxidant izay zava-dehibe amin’ny fitazonana vatana salama.
Ahoana ny fomba fikarakarana ravin’ny Moringa araka ny tokony ho izy
Mba hitazomana ny tombotsoan’ny ravina Moringa dia tsy maintsy fantatrao ny fomba fikarakarana azy. Misy fomba maro ahafahana mamboly tsara ny ravina Moringa, toy ireto manaraka ireto:
Namboarina ho dite.
Mba hikarakarana ny ravina Moringa toy izany. Tsy maintsy manao izay hahazoana antoka fa maina ny ravina Moringa. Aorian’izay dia ataovy ao anaty kaopy ny ravin’ny Moringa dia ataovy toy ny fanaovana dite. Azonao atao koa ny manampy siramamy na tantely mba hanampiana tsiro.
Ity fomba ity no fomba mahazatra indrindra. Saingy amin’izany fomba izany dia azo ampiasaina ny ampahany rehetra amin’ny ravina Moringa. Ny rano masaka dia azo sotroina ary ny ravina masaka dia azo atao salady.
Tsy vitan’ny hoe matsiro ihany koa ny legioma ravin’ny moringa, fa manankarena ihany koa. Ny ravin’ny moringa dia azo atao anana mazava miaraka amin’ny katsaka mamy sy zava-manitra sasany izay hampanan-karena ny tsirony.
Vaovao tsara! Afaka mamokatra vokatra vita amin’ny moringa izahay amin’ny alàlan’ny marika manokana / marika manokana moringa / vokatra marika fotsy amin’ny vokatra Moringa Oleifera – Mifandraisa aminay amin’ny alàlan’ny telefaona / whatsapp: +62-877-5801-6000
Previous post: Моринга извозник и приватна етикета Моринга Производство
Next post: Pengeksport Moringa & Label Peribadi Moringa Manufacture